Madaxweynaha kooxda Napoli Aurelio De Laurentiis oo xiiseenaya inuu lasoo saxiixdo David Luiz – Gool FM
(Napoli) 24 Maajo 2018. Kooxda Napoli uu hogaaminayo madaxweynaheeda Aurelio De Laurentiis uu xiiseenayo lasoo saxiixashada difaaca reer Brazil iyo kooxda Chelsea David Luiz.
Wargeyska ‘Corriere dello Sport” ayaa wuxuu daboolka ka qaaday in Maurizio Sarri uu weli qandaraaskiisa kooxda reer talyaani uu ka harsan yahay wali mudo labo sano kale, waxayna labada dhinac ku heshiiyeen in ay bixin doonaan aduun dhan 8 milyan euro hadii mid ka mid ah uu go’aansado in la kansalo heshiiska.
Napoli ayaa waxay shalay ku dhawaaqday in Carlo Ancelotti ay u magacaawday macalinka cusub ee kooxdeeda, si uu u leeliyo laga bilaawo xili ciyaareedka cusub.
Wararka ayaa waxay intaas kusii darayaan in Napoli ay xiiseeneyso lasoo saxiixashada in difaaca reer Brazil iyo kooxda Chelsea David Luiz ay kula soo saxiixato beeca xurta ah, si loo kansalo heshiiska Maurizio Sarri iyadoo aan wax lacag ah la bixin doonin.
Sida laga soo xigtay saxaafada dalka talyaaniga, Carlo Ancelotti ayaa doonaya inuu qorshihiisa kooxda Napoli uu qeyb kaga soo dhigto xili ciyaareedka soo aadan David Luiz.
Cristiano Ronaldo oo ka hadlay difaacii ugu adkaa uu ka hor yimid xirfadiisa kubada cagta